Shixnadaha taleefannada gacanta ayaa hoos u dhacay adduunka oo dhan sida ay sheegtay Mary Meeker | Wararka IPhone
Waxaan horeyba u helnay warbixin sannadeedka Isbeddellada Internetka ee 2019 ee Mary Meeker. Tani waa isku-dubarid xog ka socota falanqeeyihii hore ee caanka ahaa ee Wall Street wuxuuna muujinayaa dhinacyo kala duwan oo isbeddellada hadda socda oo ay ku jiraan tirooyinka qallafsan ee rarka qalabka moobiilka adduunka, isticmaalka internetka, ama guud ahaan e-commerce.
Sannadkan warbixintu waxay ku dareysaa xog muggeed oo wanaagsan oo ku saabsan kororka isticmaalka Internetka adduunka oo dhan qaab adag laakiin ka gaabiya sanadihii hore. Tani waxaa lagu xoojiyay tirada 51% dadka adduunka, qiyaastii 3,8 milyan oo qof oo khadka tooska ah ku jira. Xogtaan marka la barbardhigo sanadihii hore xoogaa way kayartahay sida uu qabo Meeker, way ku sii socon doontaa isbedelkan hoos u dhaca.
Hoos u dhaca ku yimaadda shixnadaha casriga ah ee adduunka ayaa dhab ah
Markaa dhibaato nagama soo foodsaarayso Apple, Samsung ama shirkadaha kale ee gacanta ku haya soo saarista aaladaha casriga ah ee casriga ah, waxaan la kulannaa hoos u dhac caalami ah oo ku yimaada shixnadaha adduunka oo dhan waana tan iyaga oo dhan wada saameysay. Hoos udhaca kobaca sanadka 2018 ayaa horeyba u ahaa 4% sanadkanna waxay umuuqataa mid lasocota isla isbedelkaas marka xogtaan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan tahay soo saarayaashaan arka sida xogtan aysan dib ugu soo laaban. Kani waa garaafka muujinaya xogta rarka ee ay ku kala duwan yihiin macruufka, Android iyo inta kale:
Waxa cad in xogta laga keenay iibka casriga ayaa hoos u dhici lahaa tan iyo sanadkii 2017 iyo isbeddelka hadda socdaa waa sidiisii. Marka lagu daro qoraalka buuxa ee warbixintan, waxaad arki kartaa xog xiiso leh oo khuseysa, sida iibka elektaroonigga ah ayaa sidoo kale arkay koritaankooda oo gaabis ah, kororka sawirada mid kasta oo ka mid ah tweets-ka ay isticmaalayaashu ku daraan shabakadda bulshada ee Twitter ama kor u kaca shirkadaha aan tiknoolajiyada ahayn ee ka mid ah kuwa adduunka ugu qiimaha badan. Waad arki kartaa warbixinta oo dhan halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Shixnadaha taleefannada gacanta ayaa hoos u dhacaya adduunka oo dhan sida ku xusan warbixinta Isbeddellada Internetka ee Mary Meeker
TvOS 2 Beta 13 wuxuu keenaa "Sawir-Sawir" Muuqaal